လျက်စစ်မလိုဘဲရေပေးဝေလို့ ရတဲ့ ဂျိုးဖြူရေလှောင်ကန် – Blue Sea
လျက်စစ်မလိုဘဲရေပေးဝေလို့ ရတဲ့ ဂျိုးဖြူရေလှောင်ကန်
blueseaskt | August 20, 2019 | Knowledge | No Comments
ဂျိုးဖြူ ပင်မရေလှောင်ကန် ကြီးက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် အမြင့်ပေ ၂၁၅ပေ အောက်ရေစစ်ကန်က ပင်လယိရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၈၉ ပေ
အဲ့ရေစစ်ကန်ကနေ ရန်ကုန်မြို့ ထဲထိ အဆင့်ဆင့် ရေပေးဝေတာ လျှပ်စစ် မလိုပါဘူးတဲ့ သဘာဝအတိုင်း အနိမ့်ကို စီးဆင်းသွားတာပါတဲ့
အရှေ့တောင်အာရှမှာ တစ်ကန်ထဲသော ဓါတ်အားမလိုသော ရေပေးဝေရေး စနစ် နဲ့ သေသေချာချာ ရေမြေသဘာဝတွေ ကို တွက်ချက် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကန်ကြီးပါ
ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းတွေအထိ တွက်ချက်ဆောက်လုပ်ထားတာ ရေကို လျှပ်စစ်မပါပဲ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်အောင်
ဂျိုးဖြူ ကန်ကြီးကို ၁၉၃၇ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂန်က ပညာရှင်တွေက ဆောက်လုပ် ခဲ့တာပါ တဲ့😍
ရေမြေသဘာဝတွေ အကုန်တိုင်းတာ တွက်ချက်ပြီး အင်္ဂန်မှာ ဒီဇိုင်း calculation တွေပြန်လုပ်ပြီး မှ ပြန်လာဆောက်ပေးသွားတာပါတဲ့ 😍😍 အာ့ကြောင့် ခုချိန်ထိ နိုင်ငံ တကာက လာလေ့လာကြပါတယ်တဲ့ ၂၀၀၃ ငလျင်ဒါဏ်ကြောင့် အပေါ်ကန်ရေ နည်းနည်း စိမ့်ဘူး တာကလွဲရင်
၄ပေထုထည် ရှိတဲ့ လှိုင်ဂူက ရေထုတ်ပေါက် ၃ ပေါက်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ကြံ့ခိုင်မှု့ ပေးပါတယ်တဲ့😊😊😊
ရေလှောင်ကန်ကြီးက ချောင်း၅ ချောင်း ပေါင်းဆုံ တာဖြစ်ပြီး ရေကျော် လာရင် လှိုင်မြစ်ထဲကို စီးဆင်း ဖို့ ရေကျော် လဲရှိပါတယ်
အနည်ထုတ်ဖို့ အောက်ဖက်မှာလဲ စိမ်းစိုတဲ့ သစ်တောထဲကို ရေချိုတွေ စီးဆင်းဖို့ ချောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်တဲ့
ရှေးတုန်းက ပုံတွေ ကြည့်ရင်း မြေတူး မြေသယ် တာတောင် ဆင်တွေ နဲ့ လုပ်ခဲ့ ကြတာ 😍😍. အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်
Drawing တွေတော့ ရှိမရှိ မသိဘူးပေါ့နော်
ကိုယ်စိတ်ဝင်အစားဆုံးက ၁၉၃၇ တုန်းက တွက်ချက်ထားတဲ့ Structure တွေကိုပဲ ခုထိ တောင့်တင်း ခိုင်မာ နေတဲ့ ကန်ဘောင်တွေ 😍
ရန်ကုန်မြို့ထဲထိ စီးဆင်းသွားစေမယ့် Water flow slope calculations တွေ
တကယ်ကို တော်တဲ့ ပညာရှင် တွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်
ရှင်းပြတာတွေကတော့အများကြီးပဲ နားလည်တာတွေ ပြန်လာရေးပြတာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တစ်ကန်ထဲသော ဓါတ်အား မလိုပဲ ရေဖြန့်ဝေ တဲ့ ကန်နော် 😍😍😍
ဂြိုးဖွူ ပငျမရလှေောငျကနျ ကွီးက ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျထကျ အမွငျ့ပေ ၂၁၅ပေ အောကျရစေဈကနျက ပငျလယိရမေကျြနှာပွငျအထကျ ၁၈၉ ပေ
အဲ့ရစေဈကနျကနေ ရနျကုနျမွို့ ထဲထိ အဆငျ့ဆငျ့ ရပေေးဝတော လြှပျစဈ မလိုပါဘူးတဲ့ သဘာဝအတိုငျး အနိမျ့ကို စီးဆငျးသှားတာပါတဲ့
အရှတေ့ောငျအာရှမှာ တဈကနျထဲသော ဓါတျအားမလိုသော ရပေေးဝရေေး စနဈ နဲ့ သသေခြောခြာ ရမွေသေဘာဝတှေ ကို တှကျခကျြ ဆောကျလုပျထားတဲ့ ကနျကွီးပါ
ဝနျထမျးလိုငျးခနျးတှအေထိ တှကျခကျြဆောကျလုပျထားတာ ရကေို လြှပျစဈမပါပဲ ဖွနျ့ဝပေေးနိုငျအောငျ
ဂြိုးဖွူ ကနျကွီးကို ၁၉၃၇ ခုနှဈမှာ အင်ျဂနျက ပညာရှငျတှကေ ဆောကျလုပျ ခဲ့တာပါ တဲ့😍
ရမွေသေဘာဝတှေ အကုနျတိုငျးတာ တှကျခကျြပွီး အင်ျဂနျမှာ ဒီဇိုငျး calculation တှပွေနျလုပျပွီး မှ ပွနျလာဆောကျပေးသှားတာပါတဲ့ 😍😍 အာ့ကွောငျ့ ခုခြိနျထိ နိုငျငံ တကာက လာလလေ့ာကွပါတယျတဲ့ ၂၀၀၃ ငလငျြဒါဏျကွောငျ့ အပျေါကနျရေ နညျးနညျး စိမျ့ဘူး တာကလှဲရငျ
၄ပထေုထညျ ရှိတဲ့ လှိုငျဂူက ရထေုတျပေါကျ ၃ ပေါကျကို ကောငျးကောငျးကွီး ကွံ့ခိုငျမှု့ပေးပါတယျတဲ့😊😊😊
ရလှေောငျကနျကွီးက ခြောငျး၅ ခြောငျး ပေါငျးဆုံ တာဖွဈပွီး ရကြေျော လာရငျ လှိုငျမွဈထဲကို စီးဆငျး ဖို့ ရကြေျော လဲရှိပါတယျ
အနညျထုတျဖို့ အောကျဖကျမှာလဲ စိမျးစိုတဲ့ သဈတောထဲကို ရခြေိုတှေ စီးဆငျးဖို့ ခြောငျးတဈခု ရှိပါတယျတဲ့
ရှေးတုနျးက ပုံတှေ ကွညျ့ရငျး မွတေူး မွသေယျ တာတောငျ ဆငျတှေ နဲ့ လုပျခဲ့ ကွတာ 😍😍. အရမျးကို စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါတယျ
Drawing တှတေော့ ရှိမရှိ မသိဘူးပေါ့နျော
ကိုယျစိတျဝငျအစားဆုံးက ၁၉၃၇ တုနျးက တှကျခကျြထားတဲ့ Structure တှကေိုပဲ ခုထိ တောငျ့တငျး ခိုငျမာ နတေဲ့ ကနျဘောငျတှေ 😍😍
ရနျကုနျမွို့ထဲထိ စီးဆငျးသှားစမေယျ့ Water flow slope calculations တှေ
တကယျကို တျောတဲ့ ပညာရှငျ တှကေို ကြေးဇူးတငျမိတယျ
ရှငျးပွတာတှကေတော့အမြားကွီးပဲ နားလညျတာတှေ ပွနျလာရေးပွတာ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ တဈကနျထဲသော ဓါတျအား မလိုပဲ ရဖွေနျ့ဝေ တဲ့ ကနျနျော 😍😍😍
Congrats incorporate the reservoir is below the altitude of 215 feet above the sea water has wandered 189 feet above the water
The girl from the water tank in the water levels do not need to supply electricity to flow naturally lower than
Southeast Asia that does not requireapower supply system withacarefully constructed to calculate the natural Lakes
Blackout did not stop the spread of Yangon city 😍😍😍
Staff rooms constructed to calculate the water lines to distribute electricity
Joe White Lake in 1937 was the construction of the classical scholars
In the end of the natural measure calculated classical design will come from the calculation and construction 😍😍 Uh, so far, the international study in 2003 on the earthquake resistant, exceptalittle swamp water
4 volume Hlaing Cave3as wellastrong social function 😊😊😊
The water reservoir5meet if that is the famous creek, creek flows into the Hlaing River are calm
Into the sediment below the issue can not be consideredaforest green and there isamovement of freshwater streams
See pictures of ancient ground dug to carry and they did 😍😍. Good to very interesting
Drawing I do not know whether fan
Only interested in the most popular of which is calculated in 1937 Structure Until now,astrong rigid frame 😍😍
Yangon’s flow Water flow slope calculations
I really thankascholar
To know how many are inareturn to power in Southeast Asia, water distributed without my 😍😍😍
ဥပဒေအထက်မှာ ဘုရင်ကိုပင် မထားတတ်တဲ့ မင်းတုန်းမင်း ရဲ့ ငယ်ဆရာ ပခန်းမင်းကြီး ဦးရန်ဝေး အကြောင်း
ပညာရှိ အဖိုးအို ပီသပါ​ပေတယ်